बिमस्टेकोन्जाइटिस ! - परिहास - नेपाल
काठमाडौँलाई अहिले ‘बिमस्टेकोन्जाइटिस’ भन्ने रोग लागेको छ । त्यसो त, काठमाडौँ बिमस्टेकोन्जाइटिस मात्र होइन, अरु पनि धेरै रोगबाट ग्रस्त छ । तर, अहिले भर्खरै थाहा भयो, काठमाडौँ ‘बिमस्टेकोन्जाइटिस’ भन्ने नयाा रोगबाट पनि ग्रस्त छ । फारेन्जाइटिस, इन्सेफलाइटिस, मेनेन्जाइटिस भनेजस्तै ‘बिमस्टेकोन्जाइटिस’ भन्ने पनि एउटा रोग रहेछ । यो ‘बिमस्टेक’ भन्ने शब्दबाट आएको नाम हो । ‘बिमस्टेक’ बाट लाग्ने रोग भएकाले यसको नाम ‘बिमस्टेकोन्जाइटिस’ रहन गएको रहेछ ।
यो रोग लागेपछि सहर पूरै ठप्प हुने रहेछ– जामले । अहिले काठमाडौँ पनि पूरै ठप्प छ । यो फेरि यस्तो रोग हो, जुन लागेपछि कहाा, कुन बेला, कतिन्जेल, कसरी जाम हुन्छ भन्नै सकिादैन । जाम भयो कि भयो । कहीँ बाटो टालेको भन्छ, जाम । कहीँ तार मिलाएको भन्छ, जाम । कहीँ पीच गरेको भन्छ, जाम । धेरै जाम भएपछि मानिसहरु कराउाछन् जाम भो भनेर । तर, भनेर के गर्नु, यो रोगै यस्तो छ ।
यो सिजनल रोग हो रे ! केही समय चढ्छ । अनि जान्छ । अब रोग नगएसम्म त भोग्नैपर्‍यो । कि कसो ?